Laser Cutting Filter Lamba, Filtration Fabric Medium Laser manapaka Solutions - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Laser Cutting Filter Lamba, Filtration Fabric Medium Laser Cutting Solutions
Tamin'ny laser hamboatra sivana
Fast, marina sy mandeha ho azy tamin'ny laser fanapahana filtration lamba mpanelanelana amin'ny Golden tamin'ny laser flatbed CO2 tamin'ny laser fanapahana milina.
Filtration Industry Sava lalana
Filtration maha-zava-dehibe ny tontolo iainana sy ny fiarovana fanaraha-maso ny dingana, avy amin'ny orinasa entona-mafy ny fisarahana, entona-mitete fisarahana, mafy orina-mitete fisarahana, mafy orina-mafy orina ny fisarahana, ny rivotra fanadiovana sy ny rano fanadiovana isan'andro tokantrano fitaovana, filtration efa miha-betsaka ampiharina amin'ny faritra maro. Voafaritra tsara fampiharana toy ny fahefana zavamaniry, vy fikosoham-bary simenitra zavamaniry sy ny fako marary mitsika fitsaboana, lamba sy akanjo orinasa rivotra filtration, maloto fitsaboana, simika orinasa filtration crystallization, fiara orinasa rivotra, menaka filtration sy ny ankohonany famerana mari-pana, vacuum madio rivotra filtration, sns .
Amin'izao fotoana izao, ny sivana fitaovana ireo indrindra indrindra fibre fitaovana, tenona lamba sy ny vy fitaovana, indrindra fa fibre fitaovana no tena be mpampiasa, indrindra landihazo, ny volon'ondry fotsy, fotsy madinika, landy, viscose fibre, polypropylene sy nylon, polyester, acrylic, nitrile sy ny hafa synthetic kofehy , ary koa ny fitaratra fibre, tanimanga fibre, vy fibre, sns
Tahaka ny fampiharana sehatry ny filtration mitsaha-mitombo, ny fitaovana fanivanana ireo rehefa nohavaozina foana. Ny vokatra dia avy filtration dustproof lamba, vovoka kitapo, sivana lamba, cartridge sivana, sivana barìka, sivana landihazo mba hanivana fototry.
Lamba fanapahana tamin'ny laser Filter
Large endrika CO2 tamin'ny laser fanapahana milina dia tsara noho ny fanapahanao mpanelanelana amin'ny tontolo filtration noho ny tsy fifandraisana dingana sy ny fametrahana mazava tsara avo tratra ny tamin'ny laser andry. Ankoatra izany, ny mafana tamin'ny laser dingana miantoka ny taom-piotazam sisiny no voaisy tombo-kase ho azy rehefa manapaka lamba ara-teknika. Hatramin'ny lamba sivana tamin'ny laser voapaika no tsy hanaitaitra, fanodinana lasa mora kokoa tatỳ aoriana.
High fametrahana mazava tsara
Fandringanana-EDGE tamin'ny laser Teknolojia tandrify VOKATRA
Inona avy ireo tombontsoa ny nanapaka lamba amin'ny sivana tamin'ny laser?
Laser fanapahana dia lasa fironana ho an'ny sivana orinasa
Marina. Avo sy ny fametrahana mazava tsara araka ny marina ny repeatability
Zavatra maro. Nanapaka ankamaroan'ny fitaovana sivana
Clean. Non-adiresy fanapahana sy ny tsy vovoka
High manovaova. Nanapaka ny endriny izay niara-
Dingana iray-. Tsy ilaina ny rework
Cost fampihenana. Tsy misy fitaovana akanjo tsy asany
Mandeha ho azy ny vokatra amin'ny conveyor dingana sy ny sakafo ny rafitra
Filter fitaovana tsara kokoa mitaky miha lavaka. Indrindra fa ao amin'ny lavaka madinika-fanodinana, fomba nentin-drazana dia sarotra fanodinana hitsena ny fepetra napetraka. Ny tamin'ny laser dia afaka loahanao ny sivana isan-karazany fepetra arahana fanazavana sy ny lamina isan-karazany.
Malama notapatapahina sisiny. Automatic famehezana ny voapaika sisiny - tsy misy fraying.
High marina tsara, na dia ho an'ny antsipirihany tsara sy ny nipoaka-maimaim-poana ao anaty contours.
No lamba nanova - noho ny tsy nifandray tamin'ny laser fanodinana.
Applications in sivana orinasa
• Vovoka fanangonana kitapo / Filtration gazety lamba / Industrial filtration fehin / Filter cartridge / Filter taratasy / harato lamba
• Air Filtration / Fluidization / Rano filtration / ara-teknika lamba
• namaoka / Vovoka Filtration / Fitiliana / ventin-filtration
• Rano filtration / Sakafo filtration / Industrial filtration
• harena ankibon'ny tany filtration / diloilo sy ny entona filtration / pulp sy ny taratasy filtration
• Textile rivotra pielezana entana
Inona no fampiharana?
Filter fitaovana mety ho fanapahana tamin'ny laser
Filter lamba, fitaratra fibre, tsy tenona lamba, taratasy, sombin-javatra, landihazo, polypropylene, polyester, polyamides sy nylon, PTFE, sox duct sy ny indostria lamba.
Jereo More santionany Nataon'i ny Laser
Tsy fahazoan-dalana ny Flatbed CO2 tamin'ny laser milina noho ny fanapahanao sivana lamba
Hafainganam-pandeha avo, avo marina tsara ary tena automated.
Fitoeran'entana sy pinion & roa Servo rafitra fiara mihetsika. Higher fahombiazana sy ny filaminana.
Economic modely ny CO2 fandriana fisaka tamin'ny laser rafitra amin'ny fehin-kibo rafitra fampitana.
CO2 tamin'ny laser nanapaka milina ho an'ny lehibe-format fitaovana hentitra loatra.
Laser Golden JMC High Speed ​​Series High fametrahana mazava CO2 Flat Bed Laser Cutter in Details
Fitoeran'entana & Pinion
High marina tsara fitoeran'entana & pinion rafitra mitondra fiara. Ny taom-piotazam hafainganam-pandeha ho amin'ny 1200m / s, ny ACC niakatra ho any 10000mm / s 2, foana mandritra ny fotoana maharitra ny filaminana.
Izao tontolo izao-kilasy CO2 vy tamin'ny laser RF gropy, miovaova sy mateza.
Vacuum toho-tantely mitroka conveyor miasa latabatra. Fisaka, mandeha ho azy, avy tamin'ny laser reflectivity ambany hazo.
Ranomainty fiaramanidina pirinty
High fahombiazana "ranomainty fiaramanidina mpanonta" niaraka nanapaka tamin'izany andro izany.
1. Print ny boribory 2. nanapaka ny faribolana
Fametrahana mazava tsara fifanenjanana Famahanana
Auto-feeder: fifanenjanana fanitsiana sy nanome sakafo amin'ny mitohy tamin'ny laser cutter ho an'ny sakafo sy ny fanapahana.
Fananana ara-tsaina mahaleo tena zo. Ny rafitra fanaraha-maso ny namboarina ho an'ny indostria lamba.
YASKAWA Servo maotera
Anarana YASKAWA Servo maotera. High marina tsara, milamina hafainganam-pandeha, fahaizana be loatra.
Automatic manavaka System
Rafitra manavaka tanteraka mandeha ho azy. Ataovy ny zavatra sakafo, manapaka, manavaka amin'ny ady indray mandeha monja.
Hisafidy Golden Laser JMC ANDIAN-DAHATSORATRA CO2 Laser Cutting Machine
1. fametrahana mazava olana sakafo
Tsy misy fihenjanana feeder ho mora ny hanova ny Variant in-pihinanam-dingana, noho ny olon-tsotra asa fanitsiana hetsiky; Feeder fifanenjanana ao amin'ny feno raikitra eo amin'ny lafiny roa amin'ny zavatra tamin'izany andro izany, ary mitarika avy hatrany ny lamba lahateny amin'ny alalan'ny-roller, dingana rehetra amin'ny fihenjanana, dia ho tanteraka fanitsiana sy mamahana marina tsara.
2. haingam-pandeha fanapahana
Fitoeran'entana sy pinion mihetsika rafitra fitaovana avo-pahefana tamin'ny laser Tube, mahatratra ny 1200 MG / s fanapahana haingana, 8000 MG / s 2haingana ny hafainganam-pandeha.
3. Automatic rafitra manavaka
Rafitra manavaka tanteraka mandeha ho azy. Sakafo ara-nofo, fanapahana, manavaka amin'ny ady indray mandeha monja.
4. Miasa faritra azo namboarina
2300mm × 2300mm (90,5 mirefy 90,5 santimetatra ×), 2500mm × 3000mm (98.4in × 118in), 3000mm × 3000mm (118in × 118in), na tsy voatery. Ny lehibe indrindra dia ny faritra miasa ny 3200mm × 12000mm (126in × 472.4in)
Watch tamin'ny laser fanapahana milina ho an'ny sivana lamba amin'ny zavatra!
Inona no fanazavana?
Manana manontolo fanodinana tamin'ny laser teknolojia, anisan'izany ny tamin'ny laser fanapahana, tamin'ny laser sokitra, tamin'ny laser perforating sy tamin'ny laser marika. Manana be habetsahan'ny angon-drakitra tamin'ny laser dingana fanangonan-karena. Afaka mizaha toetra ny fitaovana miaraka amin'ny milina tamin'ny laser, ary manatsara ny fomba fikorianan'ny. Fitiliana santionany video, fanodinana masontsivana sy ny vaovao hafa mifandraika dia nanome maimaim-poana.
Mandehana any amin'ny sample Gallery
Inona no orinasa?
Izahay efa mpanjifa-mifantoka, tena mamantatra ny zavatra ilain'ny ny orinasa, manome nomerika tamin'ny laser fampiharana vahaolana, mampiroborobo ny fanodinana sy ny orinasa lenta ny nentim-paharazana, ary manampy ireo mpampiasa ny fanavaozana sy hampivelatra. Volamena tamin'ny laser no tafiditra amin'ny fampiharana maro eny an-tsaha, ary maro ny vahaolana any ny tari-dalan'ny anivon'ny ao amin'ny orinasa.
Mandehana any amin'ny indostria vahaolana